यस सिद्धान्तलाई हाम्रो देशको संबिधान निर्माण गर्ने कुरा सँग दाँजेर हेरौन, कस्तो होला? यहाँ मैले सभासदहरुलाई बाँदरसँग तुलना गर्न भने खोजेको होइन है। यो त एउटा exampleमात्रै हो। ६००को सन्ख्यामा रहेका बाँदरले अन्धाधुन्द टाईप गर्ने हो भने अनन्त समय सम्ममा संबिधान अवश्य पनि लेखिनेछ। भनेपछी अनेकौ समितिहरु बनाएर किन झन्झट बेहोरीराख्ने। सबैजनालाई एक एकवटा शब्द टाईप गर्न दिए त भईहाल्ने रहेछ। यसलाई mathematical treatment गरेर हे…
जाडोको आगमनसँगै रात लम्बिदैछ
जसरी लम्बिदैछन हामी बीचका दुरीहरु
घामको अनुहार हेर्ने कोशिस गर्दा गर्दै हराउदैछ
जसरी हराउदैछन हाम्रा मनका भावनाहरु
बिहानी शीत हावाको हल्का स्पर्शले बिलाउदैछ
जसरी बिलाउदैछन हाम्रा सम्बेदनशीलताहरु
समय बित्दै गएर
फेरी जाडो हट्नेछ
फेरी घाम देख्न पाइनेछ
यो हामी बीचको तुषारोलाई पगाल्नेगरी
मुक्तीनाथ यात्रा सम्झदा
जीवन एउटा मीठो संयोग त रहेछ। यो स्कुल पढ्दाखेरी घनघस्याको उकालो काट्दा भन्नेबाट सम्झेर लेखेको हो तर सन्दर्भ भने त्यो होइन है। यसमा मीठो भन्ने शब्द चै मैले जोडेको हुँ। यो शब्द सापटी लिएको हो एक साथीको, हाम्रो यात्राको सहयात्रीको। उसले गन्हाउने शब्दलाई पनि मीठोसँग fusion गरेर भन्थ्यो राम्रो सुनिने गरी, मैले पनि तेही भएर जोडीहालेँ।
यो प्रसंग हो हाम्रो मुक्तीनाथको यात्राको। ५-६ जना जाने तयारी थियो, जाने बेलामा तीनजना भईयो। तयारी गरिसकेपछी जती जना भए पनि जाने निधोमा पुगियो। यात्रा कलंकीबाट सुरु हुन्छ। पहिलो गासमै ढुङ्गा भनेजस्तो बाटो बन्द हुन्छ। खै कुनचाही यातायातको मान्छेलाई कसैले कुट्यो वा यस्तै के कुरा थियो। जे होस् बन्द हुनु थियो भयो। घरबाट जान भएर निस्किसकेको समस्यामा पर्छौ हामी। नभन्दै पोखरा जाने एउटा माईक्रो फेला पर्छ, तीन सिट खाली। संयोग होइन त। एकजना साथी भन्छ, यो मुक्तीनाथ्को कृपाले हो। म बहस गर्न चाहन्न। मेरो उद्धेश्य घुम्ने प्रमुख हो, दर्शन पनि हुन्छ भने राम्रै हो। म नास्तिक होइन, न त धर्मको अन्धबिश्वासी। मेरो बिचारमा असल काम गर्नु नै धर्म हो। मन्दिर गएर हुने नै के हो र? तर म …